Ogaden News Agency (ONA) – Adigu hadaad anigii noqotay aniguna kumaan noqdaa? Qeybtii 2aad
Adigu hadaad anigii noqotay aniguna kumaan noqdaa? Qeybtii 2aad
Qeybtii kowaad hadaad horey u aqrin hoos ka fiirso Linkiga Qeybta 1aad ee Qormadan.
Aan hoos u sii daadagee Umada Soomaaliyeed waxaa ku dhacay burbur meel kasta oo nolosha ka mid ah saameeyay waxaana gaadhay dhaawac halis ah oo boogihiii ay aad u danqanayaan dhawacaasi in uu bogsadana waxaa diidan Itoobiya, boogaha iyo nabarada in la dhayo u baahan hadii lala tacaalo waxaa dhici karta in xal iyo dawo loo helo balse boogta Soomaali kutaala in ay bogsato daaye in uu caabuqu sii kordho ayaa la doonayaa waxaana dhakhtar u ah kii suneeyay (Itoobiya) wuxuuna adeegsanayaa siyaasiyiinta Soomalda ah oo kalkaaliyeyaal ah islamarkaasna doonaya in uusan shacabka Soomaliyeed dhaawaca ka kicin.
Waxaa aad ii walwal galiya arimo aad isu badalay oo hadii aan hurdada laga toosin xili dhaw dhaqan gali doona, caruurta Soomaaliyeed ee 20 sano iyo wixii ka hooseeya jirta dariiq iyo taariikh khaldan ayay dhaxalyaan oo Soomaali iyo Itoobiya waxa ka dhexeeya lama barin, 20 jirka Soomaaliga ah cadawgiisa Soomaali ayuu u yaqaanaa wuxuuna la reemayaa cuqdada maskaxdiisa lagu dhaamiyay ee uu walaalkiisii dhabta ahaa u qabo halka uu cadowgiisiina walaal u yaqaano.
Waxaa muuqanaya in ay dadka Soomaliyeed Itoobiyaanimo u xuubsiibanayaan hadii aan xal dagdag ah la helin bulshaduna aysan baraarugin, hada la soco Itoobiyaanku inaad isnoqotaan ma doonayaan in aad iyaga noqotaana ka sii daran oo ma ogola waxayna soo qadimayaan su’aashan Adigu hadaad anigii noqotay aniguna kumaan noqdaa?
Qeybtii 1aad halkan ka aqriso